Obianọ Anabata Ndị Nkuzi Na Ụmụakwụkọ Tuuru Ùgo n'Asọmpi
Previous Article Gọọmenti Anambra Ebidorola Ụmụaka Iri Na Isii Akwụkwọ
Next Article Ọkammụta Ụzọchukwu Eguzobela Òtù Nkwàdo Agụmakwụkwọ, Bipụta Akwụkwọ Ọhụụ
Igbo sị na-abụ e too onye gburu ewu, ọ hụ ehi, o gbuo. N'ịgbaso nke a, aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ nọrọ na nso-nso a wee nabata ndị nkuzi ahụ sitere steeti Anambra, bụ ndị nwetara nturu ugo dị iche iche n'asọmpi a chịkọbara na mmemme ncheta ụbọchị ndị nkuzi na mba ụwa, nke ahọ 2019, bụ nke a chịkọbara n'Abụja.
Mmemme nnabata ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'ọgbakọ isi ọchịchị steeti ahụ, bụ nke e mere ụbọchị Mọnde n'obi gọọmenti dị n'Awka, bụ isi obodo steeti ahụ.
N'okwu ya oge ọ na-anabata ndị ahụ na ihe nrita ha buru bata, Gọvanọ Obianọ kọwara na obi dị ya ụtọ nke ukwuu nà nkwàdo ọchịchị ya na-enye ụlọakwụkwọ dị n'ime-ime obodo na steeti ahụ na-amịta ezi mkpụrụ a tụrụ anya, ma kelekwazie Kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ ntà na steeti ahụ, bụ Ọkammụta Kate Omenụgha nakwa ụlọ ọrụ "Anambra State Post-Primary Schools Service Commission" na nke "Anambra State Universal Basic
Education Board" maka ezi agbambọ ha; kpọkuokwa ka ha jisie ike.
O kwekwàzịrị nkwà na gọọmenti ya ga-aga n'ihu n'ịkwàdo ngalaba mmụta na steeti ahụ iji gaa n'ihu na-emewanye nke ọma, ọbụnadị dịka o gbuchapụkwààra ndị nkuzi ahụ nwetara mmeri, ya na ndị duru ha wee gaa ya bụ asọmpi.
N'akụkụ nke ya, Kọmishọna Omenụgha mere ka a mara na ihe nrita na nkwanye ùgwù ahụ bụ iji merùbe ndị nkuzi na ụlọakwụkwọ dị iche iche mere ka ihu ọchị waa steeti ahụ, ma kelekwazie Gọvanọ Obianọ maka ezi nkwàdo ya na ịgba dị iche iche na-ada ụda ọ na-eti na ngalaba mmụta steeti ahụ. O kwekwazịrị nkwà na ngalaba mmụta ga-aga n'ihu n'ime ka ihu ọchị na-awa steeti ahụ oge ọbụla.
Ndị Nkụzi sitere Anambra nwetara nturu ugo na ngalaba anọ na ya bụ mmemme, ma burukwa iko, obere ụgbọala na ụgbọala bọọsụ wee bata.
N'okwu dịkwa ka ibe ya, Gọvanọ Obianọ nọkwara na mmemme ahụ, wee nabata ụmụakwụkwọ tuuru ùgò n'agbà nke iri ise na asatọ, nke asọmpi nrụrịta ụka ụlọakwụkwọ dị iche iche n'ala anyị, bụ nke a kpọrọ 'Presidential Schools Debate'.
Nke ahụ bụkwa ugboro anọ ụmụakwụkwọ steeti Anambra na-eturu ùgò dịka ọkaibe n'asọmpi ahụ.